Koofi oo ka jawaabay xil ka-qaadistii lagu sameeyey - Caasimada Online
Home Warar Koofi oo ka jawaabay xil ka-qaadistii lagu sameeyey
Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii maanta xilka laga qaaday ee hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Korneyl Maxamed Aadan Koofi ayaa ka soo jawaabay xil ka qaadistii lagu sameeyey, waxuuna sheegay inuu ku qanacsan yahay tallaabadaas, isla markaana uu aaminsan yahay in shaqada dowladda ay meerto tahay.
“Xilalka iyo Shaqada Dowladda oo meerto ah awgeed, waxaan soo dhoweynayaa xil ka qaadistayda iyo magacaabista Agaasimaha Guud ee HSJ Mudane Cabdulkadir Cilmi, waxaana ugu duceynayaa in uu Allah ku garab galo masuuliyadda culus ee loo igmadey,” ayuu yiri Col. Koofi.
Maxamed Aadan Koofi oo qoraalkaan soo dhigay bartiisa Facebook ayaa madaxda Qaranka ku amaanay in hey’adda ay u soo xuleen nin dhalinyaro ah oo uu aaminsan yahay in shaqadaas uu kasoo bixi karo.
“Mahad iyo bogaadinna waxaan u soo jeedinayaa madaxda Qaranka oo hay’adda u soo xuley nin dhalin yaro ah oo aan aaminsanahay in uu halkii ka sii wadi doono howlaha hay’adda. Dowladnimada ayaa naga badan,” ayuu qoraalkiisa ku yiri Agaasimihii hore ee hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya.
Kulanka aan caadi aheyn oo maanta duhurkii ay iskugu yimaadeen Golaha Wasiirada XFS ayaa waxaa lagu ansixiyey xil ka qaadista Agaasime Koofi, waxaana xilkaas loo magacaabay Cabdulqaadir Cilmi Cali, sidoo kale golaha Agaasimihii hore Koofi uga mahadceliyay howshii u soo qabtay mudadii uu xilka hayey.
Ra’iisul wasaaihii hore ee dalka Cumar Cabdirashiid ayaa Koofi 26-kii July sanadkii 2016-kii u magacaabay xilkaan maanta laga qaaday, waxuuna Koofi ka mid ahaa dadka faro ku tiriska ah ee lasoo wada shaqeeyey xukuumadihii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Maxamed Cabdullahi Farmaajo.